Xadhiga Wadnaha: Hagaajinta Heerarka Badbaadada
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Xadhiga Wadnaha: Hagaajinta Heerarka Badbaadada
Singapore gudaheeda, 1 ka mid ah 3dii bukaan wadne qabad ayaa laga yaabaa inay la kulmaan dhacdo wadnaha ah oo soo noqnoqda. Inkasta oo baxnaaninnada wadnuhu ay tahay aasaaska ka-hortagga labaad, kaliya 6% ilaa 15% bukaannada xaqa u leh ayaa maanta xaadira barnaamijyada baxnaaninta wadnaha.
Philips Foundation iyo hay'adda adeegga bulshada ee Singapore Heart Foundation (SHF) ayaa maanta ku dhawaaqday iskaashi lagu horumarinayo natiijooyinka shilalka wadnaha ee bulshooyinka iyadoo la kordhinayo helitaanka daryeel caafimaad oo tayo leh. Barnaamijka muddada sanadka ah ee lagu maalgelinayo magaca cusub ee loo bixiyay "SHF - Philips Foundation Xarunta Fayoqabka Wadnaha" ayaa ujeedadeedu tahay in la yareeyo heerka dhimashada ee dhacdooyinka wadnaha ugu yaraan 50% (marka la barbardhigo bukaanada aan ka qayb qaadan) iyo hoos u dhigista khatarta isbitaalka ee qofka. dib u celinta 25%.
SHF - Philips Foundation Xarunta Fayoqabka Wadnaha, oo barnaamijyadeeda baxnaanintu iyo hawlaheeda ay maalgelinayso Philips Foundation sanadka soo socda, ayaa wax ka qaban doonta dhibaatadan oo waxay kicin doontaa ka qaybqaadashada sare ee barnaamijyada baxnaaninta iyadoo awood u siinaysa gelitaanka wadnaha bulshada.
SHF - Philips Foundation Xarunta fayoqabka wadnaha waa mid ka mid ah saddexda xarumood ee ay maamusho SHF kuwaas oo bixiya adeegyo baxnaanin wadnaha ah oo aad loo kabo. Waxay ku taallaa Xarunta Fortune (190 Waddada Dhexe), SHF - Philips Foundation Xarunta Wanaagsanaanta Wadnaha waxay ku habboon tahay bukaannada wadnaha iyo shakhsiyaadka khatarta ku jira si ay u helaan qalabka daryeelka lagama maarmaanka ah iyo xirfadlayaasha daryeelka caafimaadka si ay u ilaaliyaan caafimaadka wadnaha. Xarunta, shakhsiyaadku waxay mari doonaan Barnaamijka Fayo-qabka Wadnaha, barnaamijka baxnaaninta Wadnaha habaysan ee 3 iyo 4, halkaas oo SHF's xirfadlayaasha daryeelka caafimaadka ee kala duwan ay ku siin doonaan hagitaan fasalada jimicsiga ee habaysan, la-talinta nafaqada, iyo waxbarashada caadooyinka caafimaadka-wadnaha ee joogtada ah - dhammaan kuwaas oo muhiim u ah natiijooyinka ugu wanaagsan ee bukaanka. SHF waxa ay taageertaa ku dhawaad ​​2,500 qofood oo jooga sadexdeeda xarumood, kuwaas oo 675 ka mid ahi ay yaalaan xarunta Fortune.
Bixinta barnaamijka baxnaaninta wadnaha ee la heli karo ee Xarunta Fortune ayaa si gaar ah muhiim u ah hagaajinta helitaanka daryeelka dadka da'da ah, kuwaas oo inta badan aan dhaqaaqin oo aad ugu nugul dhacdooyinka wadnaha labaad. Maalgelinta ay bixiso Philips Foundation waxay sidoo kale ka caawin doontaa inay hoos u dhigto kharashka baxnaaninta wadnaha ee xubnaha si loo yareeyo qaar ka mid ah caqabadaha hadda jira ee xaddidaya helitaanka daryeelka oo ka caawiya inay u hoggaansamaan barnaamijkooda baxnaanin.
Waxbarashada iyo abuurista kalsoonida waxqabadka ayaa sidoo kale ah qaybaha muhiimka ah ee iskaashigan. Caafimaadka Dadweynaha ee Lancet waxay ogaatay in waxqabadyo caafimaad oo isdaba joog ah oo dadwayne ah oo ka dhacay Singapore ay si wada jir ah u kordhiyeen suurtagalnimada dib u soo kicinta wadnaha sambabada (CPR) ee dadka ag taagan inta lagu jiro xidhitaannada wadnaha ee ka baxsan isbitaalka (OHCA) ku dhawaad ​​sideed laab, iyo heerka badbaadada oo ka badan laba laab, taas oo muujinaysa muhiimada faragelinta noocan oo kale ah si loo hagaajiyo natiijooyinka OHCA.
Iskaashigu wuxuu sidoo kale arki doonaa 20 maxalli ah oo ku yaal Singapore oo ay ku qalabaysan yihiin defibrillators dibadeed otomaatig ah (Philips HeartStart AEDs) iyo shakhsiyaadka 500 ee lagu tababaray CPR + AED in ka badan hal sano si loo dhiso bulshooyin diyaarsan oo adkaysi leh kuwaas oo si fiican ugu qalabaysan inay wax ka qabtaan dhacdooyinka shilalka wadnaha.